ODM-Bilxiginnaafi Marcumarraa Kufaatii Obbo Taayyee Danda’aa: KOTTAA KOLFAAN GAGGABAA, 2019 - Kichuu
HomeAfaan OromooVideosODM-Bilxiginnaafi Marcumarraa Kufaatii Obbo Taayyee Danda’aa: KOTTAA KOLFAAN GAGGABAA, 2019
ODM-Bilxiginnaafi Marcumarraa Kufaatii Obbo Taayyee Danda’aa: KOTTAA KOLFAAN GAGGABAA, 2019
Maqaan abbaa isaa “ Ahmed Ali” jedhamnaan musiliima isinitti fakkate. Jimmatti dhalannaan Oromoo isinitti fakkaate. Namichi garuu lammanuu miti. Namichi Musiliimas Oromoos miti. Kan Wallaggaa fi Gujiitti Waraana bobbaasee Oromoo qulqulluu fixaa jiru isuma. Kan qe’ee Oromoo abiddaan gubsiisee qabeenya saamsisaa jiru isuma. Kan Oromoo kumootaan lakkaawamu guuree mana hidhatti naqee dararaa jiru isuma. Ammas warra soddaa fi eessumman isaa bobbaasee Naannoo isaa , Naannoo Amaaraa keessatti Masjiida gubsiisaa jiru isuma. Kan barattoota Oromoo achitti ajjeesisaa turee fi achitti ugguree jirus isuma. Oromoon waan biraa dhiisee nama kana #maqsuutu irra jiraata.
Attempts by extremists to breakdown our rich history of religious tolerance and coexistence have no place in the new prosperity focused Ethiopia. I condemn such acts of cowardice and call upon all peace loving Ethiopians to draw upon our deep knowledge of coexistence.
— Abiy Ahmed Ali (@AbiyAhmedAli) December 21, 2019
Magaalaa Sandaafaatti waajjirri ABO haala ho’aan banamaa jira.
Kosii daandii irra jiru caalaa kan nurakkise Kosii #4kiiloo jiruudha,